Wholesale Outdoor Chiitiko Tende 3x3m Tende uye Greenhouse | Kukunda
40-99 Zvidimbu 100-199 Zvidimbu > = 200 Zvidimbu
Iyi tende yekupeta yakanakira zviitiko zvemhuri zvekunze, kumahombekombe, bato remhuri, musasa uye kushandiswa kwekutengesa Unogona zvakare kuiisa mumashure medu seyakakura, inovheneka zuva kuti ufadze mhuri yako nevashanyi.
1) White upfu-zvemapuranga simbi furemu, ngura & ngura nemishonga.
2) Yakakwira mhando isina mvura uye UV inodzivirira polyester machira
3) Yakareruka seti-kumusoro uye inogadziriswa kukwirira
4) Nyore kuchengetedza uye kutakura.
Zita rekushandisa Kukunda
Model Nhamba WS-F433
FOB Chiteshi Shanghai, Ningbo
Item zita Kunze Chiitiko Tende 3x3m
Kukura kwechigadzirwa 10x10ft (3x3m)
Chakafukidza zvinhu 160gsm polyester
Masvingo emadziro Inesarudzo
Chimiro spec. gumbo chimiro-25x25 / 20x20mm, truss chubhu-10x18mm, chubhu ukobvu-0.8mm
Kurongedza Makatoni Yakasimba katoni kurongedza
MOQ Zvidimbu makumi mana
Yakanakira akasiyana siyana mabasa ekunze, senge zviratidziro, mapato, BBQs, mhemberero, kushandiswa kwekutengesa nezvimwe zvakadaro. Iyo-tsoka-gumi x-tsoka-gumi pamusoro inopa makiromita zana emamirimita emumvuri wevanhu gumi nemasere - anokwana kuti mhuri yese igare zvakanaka uye mumvuri!
Yakasimba yepamusoro gorosi simbi furemu ine chena ngura-isingagadzirike poda-yakavharwa kudzivirira.
Iwe unogona kumisa nyore tende nekungodhonza iyo bracket, iyo inokusevha iwe yakawanda nguva. Vamwe vatengesi vanogona chete kusunga tambo yekudhonza kumakona mana nekuigadzirisa. Zvigadzirwa zvedu zvinogona kugadziriswa netambo yekudhonza kune rumwe rutivi kunze kwemakona mana, Matanho matatu ehurefu hunogadziriswa.
Iyo gobvu chubhu ine irinani kugadzikana uye inotsigira simba, saka haisi nyore kukuvara uye kukombama. Dhizaini yakakwana uye kuvaka kwepamusoro kuchasangana nezvido zvako. Kuti tisimbise kona yemachira, isu tinogamuchira yakakwira qualtiy mapurasitiki ekuwanikidza.
Makona ese maviri akaturikidzana akasimbiswa. Velcro tambo dzekubatanidza kumusoro kune furemu. 4 mukomana tambo anonongedza. Uchishandisa tambo kugadzirisa canopy nematanda esimbi. Tambo dzakawedzerwa dzinogona kugadziriswa nezvipikiri zvepasi zvekuwedzera kugadzikana.
600D yakakwira-simba oxford tote bhegi, yakasimba uye isina misodzi. Kuchengetedza kuri nyore uye kutakura. Uine bhegi rakapetwa uye rinopetwa, unogona kunakirwa nenguva yako kana pati chero nguva uye nzvimbo.
Pashure: Kunze Kupeta Gazebo 3x3m
Zvadaro: Kunze Kwekupeta Gazebo Nemadziro Ekumashure 3x6m
High Quality Commercial Folding Tende 10'x ...